မြစ်ဆုံ: သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း လုပ်နိုင်တဲ့ လူသိနည်းတဲ့နည်းလေးချက
သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း လုပ်နိုင်တဲ့ လူသိနည်းတဲ့နည်းလေးချက
ဒီပို.စ်လေးကလည်း ကျနော် facebook ထည်းကနေ copy လုပ်ထားတာပါ။ အားလုံး အတွက်အသုံးတည်.မယ်ထင်လို. တင်လိုက်တာပါ ။
သေသေချာချာ ဖတ်ကြည်.ဖို.တော. လိုတာပေါ.နော် ။
Posted by မောင်မောင် at 14:15